Izindaba - Ingxoxo ngokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yomkhakha wezemithi ophakathi
Ingxoxo ngokuthuthuka kwekhwalithi ephezulu yomkhakha wezemithi ophakathi
Ixhaswe yiChina Chemical Industry Association futhi yenziwa yiZouping Mingxing Chemical Co., Ltd., umhlangano wokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yezimboni eziphakathi zemithi ububanjelwe eDezhou, esifundazweni saseShandong. Indikimba yengqungquthela ithi “ukushintshana ngemingcele, ukuhlanganiswa nentuthuko”. Abaholi abangaphezu kwama-300, ochwepheshe kanye nabamele amabhizinisi embonini yamakhemikhali banikela ngobuhlakani babo ekukhuthazeni ukuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu yale mboni.
Iphini likamongameli weChina Chemical Industry Association uphakamise ukuthi le nhlangano kufanele ihambisane nesihlokwana jikelele sokufuna inqubekelaphambili ekusimeni, ithathe izinguquko kanye namasu amasha njengamandla amakhulu, axhumanise ukuphepha kwentuthuko, akhe iphethini entsha yentuthuko, futhi asize ukuhlanganiswa kwezimboni nokwandiswa kwamazwe omhlaba .
Ngokusho kweChina Petroleum and Chemical Industry Federation, kunezindlela ezine ezibalulekile zentuthuko embonini ye-petrochemical ngokuzayo. Okokuqala, iketango lezimboni kufanele lilwele ukufezekisa "uchungechunge oluzinzile", "uchungechunge oluqinile" kanye "nochungechunge oluhambisanayo"; okwesibili, imikhiqizo kufanele ihlukaniswe ukuze isondele emakethe yokugcina; okwesithathu, okuluhlaza, ukuvikelwa kwemvelo kanye namakhemikhali empilo yizindawo ezintsha zokukhula ngokuzayo; okwesine, ukuthuthukiswa kwemingcele kanye nemikhiqizo ye- "service plus" kufanele ihlanganiswe.
U-Chen Boyang, umhlaziyi weqembu lamandla namakhemikhali e-CITIC Securities, uthe ngemuva kokuhlaziya ukusebenza kwezimali kwamabhizinisi angama-358 eminyakeni engama-30 edlule, kutholakale ukuthi isilinganiso sezindleko zezimali kumali engenayo yokusebenza yezinkampani zemboni yamakhemikhali zikhombisile ukuthambekela phansi. Ukholelwa ukuthi uMbuso ugqugquzela imakethe yezimali ukuthi iqondise ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, okunikeza ithuba elingokomlando lokuguqula kanye nokwenza ngcono imboni nosawoti wezinto ezingaphili.
IZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. ibheka izinto ezintsha kwezobuchwepheshe njengomphefumulo wentuthuko, iba sesikhundleni sokuqala ekuthengisweni kwamakhemikhali omhlaba iminyaka eyishumi ilandelana, futhi yenze igalelo elivelele ekuthuthukisweni nasekuqhubekeni kwemboni yamakhemikhali. Emhlanganweni, usihlalo wenkampani wethule isiko layo lenkampani "lokudla okumnandi, ukuqamba izinto ezintsha, ubuqotho kanye nokuzibophezela", wabeka umqondo wokuthi "ukuqamba okusheshayo" ukudala izinzuzo eziphezulu kumakhasimende
Isikhathi Iposi: Jan-11-2021
IDaixi 3th Road, Zouping County Isifundazwe Shandong, China